शनिबारदेखि ए डिभिजन लिग शुरु, प्रत्यक्ष प्रसारण कहाँबाट हेर्ने ? - Everest Dainik - News from Nepal
शनिबारदेखि ए डिभिजन लिग शुरु, प्रत्यक्ष प्रसारण कहाँबाट हेर्ने ?
काठमाडौं । चार वर्षपछि शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिता शनिबारदेखि शुरु हुँदैछ । चार वर्षपछि आयोजना हुन लागेको ‘ए’ डिभिजन लिगमा १४ टोलीको सहभागिता रहेको छ । लामो सयमदेखि लिग हुन नसकेपछि यस वर्ष एन्फाले रेलिगेशन बिनाको लिग गर्दैछ ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का लिग कमिटीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी लिगको तयारी पूरा भएको जनाएको छ । सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ‘ए’ डिभिजन लिगका निर्देशक सञ्जीव मिश्रले लिग कमिटी र एन्फाका तर्फबाट लिगको तयारी पूरा भएको बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा लिगमा सहभागी १४ वटै क्लबका प्रशिक्षकको पनि सहभागिता रहेको थियो । सो अवसरमा उनीहरुले लिगको उपाधिमा आ–आफ्नै क्लबको दाबेदारी प्रस्तुत गरे ।
शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग फुटबल एपी वान टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुने भएको छ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले ब्रोडकास्टिङ पार्टनरका रुपमा आज एपी–१ एचडी टेलिभिजनसँग सम्झौता गरेको छ ।
(एन्फा)ले डिजिटल पार्टनर र अनलाइन लाइभका लागि भने माइकुजुसँग यसअघि नै सम्झौता गरिसकेको छ । एन्फाले तीन वर्षका लागि एपी–१ सँग सम्झौता गरेको हो । सम्झौतासँगै ‘ए’ डिभिजन लिगका ९१ वटै खेल एपी–१ टेलिभिजनमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछन् ।
प्रत्यक्ष प्रसारण गरेबापत एपी–१ यस वर्ष एन्फालाई रु ३० लाख, अर्को वर्ष रु ३५ लाख र तेस्रो वर्ष रु ४० लाख उपलब्ध गराउने एन्फा प्रवक्ता किरण राईले जानकारी दिए। -रासस
ट्याग्स: sahid smarak, शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग